Graphic Designer(Male) (250,000~300,000 MMK) Code-12296
– တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။
– သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂)နှစ် အထက်ရှိရမည်။
Job Categories: Design. Job Types: Full-Time. Job Tags: 000 mmk), 000~300, and graphic designer(male) (250. Salary: 100,000 - 300,000. 93 total views, 1 today Apply for this Job / အလုပ်လျှောက်လွှာ